कसरी होला अमेरिकामा सत्ता हस्तान्तण ? के ट्रम्पले अझै 'कू' गर्ने प्रयास गर्लान् ?
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शासनकालको अन्तिमतिर आइपुगेका छन् । तथापि राष्ट्रपति ट्रम्पको गुप्त र क्रमबद्ध षड्यन्त्र अझै राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ । कतै ट्रम्प ‘कू‘ को प्रयास त गरिरहेका छैनन् ?
नोभेम्बरको चुनावी हारपछि चुनावी परिणाम विरुद्धको कानुनी कार्बाही, राजनीतिक दवाब, अति दक्षिणपन्थी तत्वहरुलाई प्रदर्शनका लागि उक्साहट, निर्वाचन अधिकारीहरु यहाँसम्म कि रिपब्लिकनहरुलाई समेत धम्कीजस्ता कार्य गर्न उनले छोडेका छैनन् ।
ट्रम्पले निर्वाचन परिणामलाई मान्यता नदिने उद्देश्यले जनवरी ६ मा हाउसको बैठक आव्हान गरेका छन् । सोही दिन उनका समर्थकहरुलाई वासिङगटन डिसी मार्च गर्न भनिएको छ । यो मार्च हिंसात्मक हुने सम्भावना छ । अर्कोतिर ड्रोन आक्रमणबाट जर्नेल सुलेमानीको हत्याको वर्षगाँठ जनवरी ३ मा इरानी सेनाले गर्न सक्ने सम्भाव्य हमलाको प्रतिरोधका लागि खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्यबल तथा नौसेनाको तैनाथी र सतर्कता बढाइएको छ ।
चुनावी परिणामप्रति सृजित भ्रम, आन्तरिक अशान्ति र सैन्य हस्तक्षेपको खतराबीच अमेरिकी सेना र राष्ट्रिय जीवनलाई भयावह क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नका लागि ट्रम्प जानाजान अराजक र अन्यौलपूर्ण स्थिति तयार गर्दैछन् ।
जनवरी ५ का लागि ट्रम्पद्वारा बोलाइएको बैठक र मार्चपासप्रति अमेरिकी सेना वरिष्ठ अधिकारीहरु निक्कै चिन्तित छन् । जनवरी २० मा बाइडन प्रशासनलाई सत्ता हत्तान्तरण गर्न हाउसले अनुमति दिनुपर्ने अमेरिकी प्रचलन छ । निर्वाचक मण्डलले जोसेफ वाइडन निर्वाचित भएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पले त्यसो हुन नदिन एक ट्वीटमा आफ्ना समर्थकलाई ‘षडयन्त्रपूर्वक चोरी गरिएको निर्वाचन परिणाम’लाई लागू हुन नदिन ‘जंगली पारा’ले प्रदर्शन गर्न भनेका छन् ।
जनवरी ३ मा इरानी जर्नेल सुलेमानी र इराकी मिलिसिया नेता अबु अलबदी अल मुहादिशको हत्याको वर्षगाँठको अवसरमा सैन्य दुरुपयोग हुने चिन्ता बढेको छ । बगदादको अमेरिकी दुतावासमा भएको हमलाको जवाफमा ट्रम्पले इरानमाथि रकेट हमला गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन् ।
यी कार्यहरु अमेरिकी सेना परिचालन गर्न, पद नछोड्न र राष्ट्रिय आपकताल घोषणा गर्नका लागि हुन सक्दछन् । अमेरिकाका सम्मानित सञ्चार माध्यम वासिङटन पोष्ट, न्यूजवीक, द हिल, सिएनन आदिमा यसप्रकारको सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न विद्वान, इतिहासका र सत्ता राजनीतिका जानकारहरुले समेत यस्तो सम्भावना औंल्याएका छन्, ती मध्ये येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टिमोथी स्नाइडर समेत छन् ।
अर्कोतिर वाइडनको राष्ट्रिय सुरक्षा टिमलाई ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्धनसम्बन्धी प्रमुख जानकारीहरुसम्म पहुँच बनाउन व्यवधान गरिरहेको समाचार छ ।
ट्रम्पका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार जर्नेल माइकल फ्लिनले ‘चुनावी युद्धभूमि राज्यहरु’ (विकिल्सन, पेन्सनभेनिया र मिचिगन लगायत) मा पुन चुनाव नगरिए मार्सल ल लगाउन सकिने बताएका छन् । यसबारे ह्वाइट हाउसमा बारम्बार चर्चा भएको बताइन्छ ।
यही कारणले अमेरिकी सेनाले यस्ता हल्लाबारे प्रेस विज्ञप्ती दिन जरुरी ठानेको थियो जसमा अमेरिकी सेनाले चुनावमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु परेको थियो । तर पनि प्रश्न बाँकी नै रहन्छ, किनकी अमेरिकी सेनामा जर्नेल फ्लिनको कमाण्ड अझै कायम छ ।
सन् २०२० नोबम्बरको चुनाबी हारपछि पनि आगोमा तेल थप्न ट्रम्पले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन । उनले पेन्टागनबाट नागरिक नेतृत्वलाई हटाएइका छन् । त्यसको ठाउँमा उनले आफूप्रति बफादारलाई नियुक्त गरेका छन् । भर्खरैको समाचार अनुसार ट्रम्प फ्लोरिडाबाट नयाँ वर्षको कार्यक्रम छोडेर ह्वाइट हाउस फर्किएका छन् ।
मिसौरीका रिपब्लिकन सिनेटर जोस हावले भनेका छन् कि जनवरी ६ मा उनले निर्वाचक मण्डललाई नोभेम्बर निर्वाचनको पुष्टि गर्नबाट रोक्ने छन्, त्यसमाथि कांग्रेसको जाँचबुझ शुरु हुनेछ । हावलेले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पको पक्षबाट उम्मेद्वार हुने व्यक्तिको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यो प्रष्ट छ कि ट्रम्प वासिङ्टनमा कुनै न कुनै प्रकारको गडबढी मच्चाउने कार्यका लागि भित्रभित्रै समन्वय गर्दैछन् ।
यो संकटपूर्ण राजनीतिको पूर्ण चित्र जनवरी ५ मा हुने जर्जियाको जारी निर्वाचनमा पनि देखियो । त्यहाँ गभर्नरलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । गभर्नर केप ट्रम्पप्रति बफादार मानिन्थे । तर उनले निर्वाचन परिणामलाई चुनौति दिन अस्वीकार गरे । ट्रम्पले गवर्नर केपलाई राजीनामा गर्न भने । उग्रवादी ट्रम्प समर्थकहरु जर्जियाको चुनाव नै बहिष्कार गर्नु पर्दछ भन्दैछन् । उनीहरु चुनाव धाँधली हुँदैछ भन्ने हल्ला पिट्दैछन् । त्यहाँ अर्ली मतदानबाट धेरै मत डेमोक्र्याट्सहरुलाई प्राप्त भइरहेको छ, जो ट्रम्प र ट्रम्पवादीहरुका लागि आपत्तिको बिषय बन्ने गरेको छ ।
ट्रम्प संकटमाथि संकट थप्न उदत्त छन्, त्यसबाट निस्कने उपाय खोज्न उनलाई पर्वाह छैन । महामारी र आर्थिक संकटले ग्रस्त जनसाधारणप्रति उनको कुनै रुचि छैन । यतिखेर ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ बाहेक अरु केही देखिरहेका छैनन् । जर्जियाका सिनेट सीटहरु गुमाउनु ट्रम्पका लागि झनै असह्य स्थिति हुनेछ । जर्जियाको राजनीतिमा ट्रम्पिज्मको प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यो नजिकिदो सिनेट निर्वाचनले पनि देखाउने छ ।
यी यावत चर्चा र परिदृष्यबीच बाइडन अझसम्म मौन छन् । सायद अरु अमेरिकी जस्तै उनी ट्रम्प र ट्रम्पवादीहरुको उपद्रो कुन सीमासम्म जान सक्दछ भन्ने रमिता हेरिरहेका छन् । ट्रम्पले कू गरेका त्यो निक्कै डरलाग्दो र प्रगति विरोधी कुरा हुनेछ । त्यस्तो फासीवाद र अधिनायकवादविरुद्ध प्रगतिशील आन्दोलन उठाउनुको कुनै विकल्प रहने छैन ।
Cover Photo: Reuters/Tom Brenner
तथापि यो स्मरण गर्न जरुरी छ कि गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा ट्रम्पको पराजय एक निर्णायक कुरा थियो । यो निर्वाचनमार्फत् अमेरिकी मतदाताले श्वेत नश्लवाद, सीमा इलाकामा पर्खाल, आप्रवासीप्रति कठोर नीति, महामारीको विनाशकारी प्रतिवाद र नश्लवादी प्रहरी–हिंसाको विरुद्धमा कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक सहिष्णुता र विविधताको स्वागत गर्दै सीमारेखा खिचेका छन् । तर यो रेखा ट्रम्पिज्मतिरको झुकावबाट बिल्कुलै मुक्त भने छैन । एक प्रगतिशील परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकालाई निपटारा गराउनु वाइडनका लागि चिन्तापूर्ण चुनौतिको बिषय बनेको देखिन्छ ।
वाइडनप्रति आशामाथि चिन्ताको बादल कहाँनेर छ भने वाइडनले पनि ट्रम्पिज्मले पाएको मतलाई अनदेखा गर्न सक्दैनन् । ट्रम्पले ७ करोड ४० लाख बढी मत पाएका छन् जो सन् २०२४ को चुनावमा डेमोक्र्याट्सहरुले फेरि सामना गर्नुपर्ने मत हो । युवा, अल्पसंख्यक समुदाय र विद्यार्थीलाई नयाँ प्रगतिशील मतदाताको रुपमा ऊर्जा दिन नसके ट्रम्पले पाएको मत जुनकुनै बेला भारी पर्न सक्दछ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा त्यसले आफ्नो विनाशकारी रुप देखाउन सक्दछ ।
के वाइडनले व्यापक स्वास्थ्यसेवा सुधार कार्यक्रम ल्याउलान् ? के प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति वास्तवमै प्रभावकारी होला ? अमेरिकी मध्यम वर्गको आधारभूत ढाँचामाथिको लगानी सार्थक होला ? विद्यार्थीहरुको कलेज शुल्क र छात्र ऋणबारे के होला ?
सबैभन्दा ठूलो तस्वीर के हो भने अमेरिकी बैधताको लामो र गहिरो संकट दुवै राजनीतिक दलको बढ्दो अलोकप्रियता, सरकार र आम जनताबीच टुटेको सम्बन्ध, आर्थिक अनिश्चितता, महाब्याधीको ज्यानमारा गर्जन र भोका मानिसहरुको बीचबाट हिंडिरहेको छ ।
(द वायरबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)